Waan ayidsanahay Aftida 110
Dadka reer Oregon waxay u baahanyihiin macaamil wanaagsan. aynu badbaadino nafaf.
Oregon waxay ku jirtaa kaalinta ugu dambeysa ee dhammaan gobollada helitaanka daaweynta asaasiga ah ee maandooriyeyaasha. Mid ka mid 11-kii qof ee ku nool Oregon wuxuu qabatimay maandooriyeyaasha, hal ilaa laba qof ayaa maalintii u dhimata isticmaalka maandooriyaha, mararka qaar taas waxa ay dhacdaa ayagoo sugaaya in ay helaan daaweyn.Tani xiisad qalalaase ka jirta gobolkeena.
Dhanka kale, sharciyadayada daroogada ee hadda jira waxay burburin karaan nolosha iyagoo ku saleysan hal qalad. Haysashada xadi yar oo ka mid daroogada waxay qofka ku hoggaamin kartaa in uu xabsi u galo taasoo saamayn ba’an ku yeelanaysaa mustaqbalka qofkaasi taasoo ka hortagi karta in qofkaasi shaqo hello, guri laga kireeyo ama loo diidi in loo oggolaado in uu hello Credit Card. Habka aan hadda u wajahno ka hortagga daroogada ayaa ah hanaan sii kala fogaynaayo qoysaska, laakin helitaanka daaweynta ayaa qoysaska ka dhigi karta kuwa awood leh.
Aftidan maahan mid sharci ka dhigaysa wax daroogo ah.taas badaelkeeda waxa ay meesha ka saaraysaa in dambi weyn laga dhigo haysashada xadi yar oo ka mid ah daroogada, waxayna dadka ku xeraysaa sidii ay ku helli lahaayeen daaweyn iyo adeegyada soo kabashada. iyadoo la adeegsanaayo lacagaha laga hello canshuurta Marijuan-ha ee jira, aftidan 110 ayaa si weyn u ballaarin doonta helitaanka daaweynta daroogada iyo adeegyada soo kabashada ee gobolka oo dhan. Qof kasta oo raba daaweyn wuu heli karaa, ma aha oo keliya kuwa haysta lacagta ama qorshaha “xaqa” caymiska.
Aynu badbaadino nafaf, oo yaynaan burburin
Dadka la ildaran qabatinka waxay u baahan yihiin caawimaad, ee ma aha ciqaab dembi. Tallaabadani waxay abuuri doontaa bini'aadanimo, hab caafimaad ku saleysan oo wax looga qabto qabatinka maandooriyaha. Dadku mar dambe lama qabsan doono oo xabsi lama dhigi doono si fudud haysashada daroogo yar. Taabadalkeed, waxay ku xirnaan doonaan daaweynta saxda ah ama adeegyada soo kabashada, oo ay kujirto kaalmada guriyeynta, si looga caawiyo iyaga inay noloshooda dib ugu soo ceshadaan.
Dadnimo bina aadamnimo, hab wax ku ool ah oo nafta badbaadin doona - iyo lacag
Waxay ku kacaysaa ku dhawaad $30,000 in la qabto, la maxkamadeeyo oo la xiro qof haysashada daroogada fudud. Kaliya waxay ku kacdaa $10,000 oo keliya in lagu bixiyo daweynta daroogada dadka iyaga raba. Tallaabadan ayaa wax ka beddeli doonta qaabkeenna: halkii aan ku qaban lahayn oo xirno dadka daroogada, waxaan u isticmaali lahayn dakhliga canshuurta marijuana si aan ugu bixinno adeegyada daaweynta balwadda. Waxay badbaadin doontaa lacag waxayna badbaadin doontaa nafo.
Xirfadlayaasha iyo hoggaamiyeyaasha bulshada ayaa taageeraya aftida 110
Cilmi baare Daawooyinka qabatinka daroogooyinka, Xirfadle daryeelka caafimaadka kuwa aan guryaha haysan
Daroogada oo xad dhaaf loo isticmaalo hadda waxa ay dhishaa dad badan oo da'dooda ay ka yartahay 50 sano in ka badan waxyaabaha kale. hadana waxaan sii wadaynaa inaan labalaabno sanadaha tobanaad ee siyaasadaha dagaalka daroogada ee fashilmay. In dambiileyaal laga dhigo kuwa daroogada isticmaala waxay dab ku sii shidaysaa mashiinka dhaqaajinaaya qalalaasaha aad u isticmaalida daroogooyinka iyadoo aan talaabo loo qaadayn sidii lagu yarayn lahaa daroogooyinkan dhibaatada inagu haysa. iyadoo xabsi loo taxaabaayo dadka isticmaala daroogooyinka, taasoo ka dhigan in aan kala go'doomi nayno bulshada, waxyna kobcinaysaa in deegaanada ay noqdaan kuwa aan ammaan ahayn, waxaanan ka hortagnaa dadka inay gaaraan amniga iyo shaqo la xiriirta isticmaalka khatarta yar. Oregon, aan ku bedelno ku gurida dadka xabsiyada maalgelin ku salaysan daaweynta iyo taageerada. waxaana noo furan jid wanaagsan oo aan qaadi karno.
Agaasimaha laanta fulinta, Unite Oregon
Dadka reer Oregon waxay aamisan yihiin in nidaamkeenna badbaadada dadweynuhu inuu noqdo mid caddaalad ah oo loo wada dhan yahay bulshooyinka oo dhan. Si kastaba ha noqotee, gudaha Oregon iyo guud ahaan Mareykanka, dadka midabka leh, soogalootiga, iyo qaxootiga waxay la kulmaan takoor marxalad kasta ee nidaamka, gaar ahaan markay tahay maandooriyaha. Taasi waa khalad oo sumcad leh. Go'aaminta haysashada daroogada iyo ballaarinta helitaanka daaweynta waxay gacan ka geysaneysaa yareynta kala-duwanaanshaha isirka ee nidaamkeena caddaaladda dembiyada, iyo waxay caawineysaa dhammaan dadka reer Oregon ee ay ku dhacday qabatinka maandooriyaha, waxaan taageersanahay aftida loo qaadaayo 110 sababta oo ah waa tallaabo muhiim ah oo lagu gaarayo in la gaaro caddaalad midab-sooc ah oo ka dhex dhaca nidaamkeenna nabadgelyada dadweynaha.
aasaasaha, Central City Concern; Agaasime Hawlgab ah, Caafimaadka Maskaxda iyo qabatinka ee gobolka State of Oregon
Dambi ka dhigida isticmaalka daroogada ee shakhsiga ah qeyb ka ah dagaalka 50+ sano ee dagaalka daroogada waxay ahaayeen guul darrooyin lixaad leh oo baabi'iyay nolosha dad aan tiro lahayn. Waa waqtigii loo beddeli lahaa qaab daryeel caafimaad oo loo wajahayo xallinta dhibaatooyinka balwadda. Waxaan ogsoonahay bixinta adeegyada saxda ah waqtiga munaasibka ah iyada oo aan wax carqalad ah ay muhiim u tahay ka soo kabashada guul leh ee isticmaalka maandooriyaha. Bixinta adeegyada sida ku qeexan macluumaadka aftida 110 waxay si wax ku ool ah u siin doontaa daaweyn ku saabsan baahida loo qabo kuwa la halgama qabatinka maandooriyaha.
La tacaale daaweynta daawooyinka awooda badan ahna cilmi baare siyaasadeed
Ka cilmi baare caafimaadka bulshada ah, kuna haminaaya in uu mustaqbalka noqda dhkahtar daaweeya balwadaha, waxaan taageersanahay daaweynta qabatinka daroogooyinka iyo xeerka soo kabashada sababta oo ah ciqaabta iyo Mamnuucidda ma ahan kuwo daliil u ah caddeyn ama hab dhaqan bini-aadamnimo ee daaweynta balwadda. Dadka isticmaala daroogada iyo kuwa dhibaatooyinka maandooriyaha isticmaala waa inay si fudud fursad ugu helaan helitaanka daaweynta qarniga 21aad iyo wax ka qabashada soo kabashada. Oregon ayaa kaalinta 50aad ka galay helitaanka daaweynta balwadaha; waan awoodnaa, waana inaan qabanaa shaqo wanaagsan!
Ayeeyo isla markaana ah sarkaal howlgab ah oo ka tirsanayd ciidanka asluubta
Aabe islamarkaana ah Awoowe degan Oregon
Waxaan bixiyaa canshuur waxaan shaqeeyey nolosheyda oo dhan - haddana aniga waxaa wali laygu tixgaliyaa inaan ahay dambiile dambiyada maandooriyaha dhacay 27 sano ka hor. Waxay iga ilaalisay inaan guuleysto oo aan noqdo waxa kaliya oo aan noqon karo: tusaale ku dayasho wanaagsan carruurteyda iyo ayeeyooyinka, iyo iyaga inay ogaadaan in ninka ay jecel yihiin uu ku yeelan karo nolol adag, oo wax soo saar leh..
Agaasimaha Laanta fulinta, Mental Health and Addiction Association of Oregon
Waxaan qabatimay Methamphetamine oo aan isticmaalaayay muddo 22 sano ah iyadoo anigoo u dhaxeeyay in aan mar walba galo xabsi, taasoo sababteeda ay tahay dambiyadayda diiwaanka iigu jiro iyo qabatinkeyga, waxaan ku dhibtooday inaan helo guri iyo shaqo oo layla dhaqmo si ixtiraam iyo qadarin leh. Haddii aan heli lahaa daaweyn iyadoo aan si dhaqsi leh u soo kaban lahaa. taasoo wax badan ka badeli lahayd xaaladeyda. Laakiin daaweyntu waxay shaqeynaysaa oo keliya markaad awoodo inaad hesho, waana sababtaas sababta loo heli karo iyadoo loo baahan yahay, qof kasta oo u baahan. Nasiib darrose, Oregon waxay ku dhowdahay ugu dambeynta helitaanka daaweynta. Talaabadan ayaa ah fursadeena inaan badalno taas. Aynu ku dhisno qaab bini-aadamnimo, qaab caafimaad-ku-saleysan oo wax looga qabto qabatinka maandooriyaha ee Oregon. ”
Ka tirsanaa ciddanka degmada Clackamas
Waxaan dib u milicsiinayaa shaqadaydii 33 sano ahayd ee fulinta sharciga Oregon, waxaan aaminsanahay in qaabka dambiga / ciqaabta ee wax looga qabanayo balwadda maandooriyaha uu guuldarreystay. Tani waa mashaakil caafimaad dadweyne waana in loo daaweeyaa sidan oo kale. Cidna kuma guulaysato markay boolisku maalmaheena ku ciqaabaan dadka haysashada maandooriyaha. Qof kasta oo aan u qabano daroogada waa hal qof oo dheeri ah oo diida inuu nala hadlo markii aan su'aalo weydiineyno marqaatiyaasha oo aan ururinno tilmaamaha. Sharciyadayada daroogada ayaa ka dhigaya booliisku inay sii adkaadaan shaqooyinkooduna nabadgelyadooda yareeyaan.
maku taabatay adiga ama qof aad jeceshahay dhibaatada qabatinka daroogooyinka ee ka jirta gobolka Oregon?
Daryeel daawo dheeraad ah, Oregon xasiloon.Fadlan ku soo biir ololaha.